Antonio Conte Oo Xaqiijiyay In Goolhaye Thibaut Courtois Uu Taam Buuxa U Yahay Kulanka FA Cupka Ee Tottenham, Muxuuse Ka Yidhi Sababtii Qariibka Ahayd Ee Uu Courtios Ku Dhaawacmay? - Laacib.net
Antonio Conte Oo Xaqiijiyay In Goolhaye Thibaut Courtois Uu Taam Buuxa U Yahay Kulanka FA Cupka Ee Tottenham, Muxuuse Ka Yidhi Sababtii Qariibka Ahayd Ee Uu Courtios Ku Dhaawacmay?
Tababaraha kooxda Chelsea ee Antonio Conte ayaa jamaahiirta kooxdiisa Blues ka farxiyay kadib markii uu sheegay in goolhaye Thibaut Courtois uu taam buuxa u yahay kulanka afar dhamaadka FA Cupka. Goolhayaha ree Belgium ee Thibaut Courtois ayaa seegay guuldaradii Chelsea ka soo gaadhay Manchester United kadib markii uu si lama filaan ah dhaawac ugu soo gaadhay xayasiin ganacsi oo uu kooxdiisa Blues u samaynayay.
Antonio Conte ayaa sheegay in uu kooxdiisa kala hadlay arintan balse wixii ay ka wada hadleen uu yahay mid sir ah. Conte ayaa sheegay in waxa ugu muhiimsani uu yahay in goolhaye Thibaut Courtois uu markale taam yahay isla markaana uu ciyaari doono kulanka Tottenham ee FA Cupka.
Tababare Conte oo ka hadlaya xaalada Thibaut Courtois ayaa yidhi: ” Waxa ugu muhiimsani waa in uu Thibaut soo kabsaday. Waxa uu isagu tababarka nala qaatay todobaadkan. Kan ayaa ah waxa ugu muhiimsan, kadib waxaan kala hadlay kooxdayda. Waxaan filayaa in marka aan kooxdayda kala hadlay ay muhiim tahay in aan wada hadalka ku hayo sirtiisa oo aanu horumar ka samayno xaalad kasta”
Laakiin Antonio Conte ayaa qiray in arimaha ganacsi uu Courtios dhaawacu ku soo gaadhay ay kooxdiisa muhiim u yihiin wuxuuna yidhi: ” Shaqada ganacsi waa mid kooxda aad muhiim ugu ah. Koox wayn ganacsigu waa mid aad muhiim ugu ah, laakiin waan ku celinayaa markasta waa muhiim aad cid kasta ku xidhnaataa isla markaana aad hesho xalka ugu fiican ee horumarin lagu samayn karo”.